FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIANDRY ALAINA - ALIKA
Alaskan Malamute / Mpiandry Alemanina mifangaro alika
Yuemi the Alaskan Malamute / Shepherd Alemanina mifangaro amin'ny 1 1/2 taona (ankavia) miaraka amin'ny rahalahiny maloto (ankavanana) - 'Yuemi dia matetika no diso hevitra a amboadia Tsy azoko atao intsony ny mitondra azy mandehandeha eny amin'ny manodidina noho ny tahotra sao misy fibaikoana biby nantsoina taorian'ny vehivavy hafa iray tany an-toerana amboa amboadia nesorin'ny tanàna an-kery nilaza taminy fa be ny haromotana ao an-toerana ary tsy navela intsony ny alika amboadia. Toa madio ny anadahiny wooley Malamute ary ny tiako holazaina dia ny Malamute rehetra ka manahirana ny fisian'ny olona betsaka hiampanga ny rahavaviny ho amboadia. Malamute izy. '
Ny Alaskan Shepherd dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Alaskan Malamute ary ny Alika mpiandry alemanina . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Zeus dia Mpiandry Alemanina 1 taona, afangaro Alaskan Malamute. Izy dia tena matanjaka ary tsara fitondran-tena. Malemy fanahy be izy amin'ny ankizy SY miaro amin'ny fianakaviana iray manontolo. '
Zeus the Alaskan Malamute x German Shepherd mix (Alaskan Shepherd) amin'ny 1 taona
'Champ dia mpiandry alemana 10 herinandro x Alaskan Malamute mifangaro. Tena be fitiavana izy ary tsara miaraka amin'ireo zanatsika mbola tanora 2 taona. Milamina tokoa izy ary tsy afaka mangataka alika kely isika. '
Zeus the Alaskan Malamute x German Shepherd mix (Alaskan Shepherd) amin'ny 1 taona— 'Zeus dia alika kely toetra. Feno hery sy be fitiavana izy. Alika manan-tsaina ary tena mora fiaran-dalamby . '
Fyodor the Alaskan Malamute x German Shepherd mix (Alaskan Shepherd) toy ny alika kely amin'ny 12 herinandro— 'Fyodor dia zazakely kely malemy paika sy milalao. Midradradradra toy ny Malamute izy ary mivovo tahaka ny mpiandry ondry. Tiany ny milalao amin'ny alika kely sy alika hafa raha vao fantany izy ireo sy ny manodidina azy. Salama tsara izy trano voaofana efa ary tsy nandatsaka volo tao an-tranonay. Miantehitra tanteraka amin'ny finamanana izy ary tsy tiany irery mihitsy. '
Fyodor the Alaskan Malamute x German Shepherd mix (Alaskan Shepherd) ho alika kely amin'ny 12 herinandro
'Ity i Ben, ny Alaskan Malamute / Alika Mpiandry Alemaniko 8 taona. Tena bonne be izy ary matanjaka. Nahazo fanatanjahan-tena be dia be izy, tia milalao ary sariaka amin'ny olona. Ben dia tena manan-tsaina ary mora zatra. '
husky afangaro amin'ny pitbull orona manga
Delta the Alaskan Shepherd (Malamute / Shepherd) afangaro amin'ny alika kely mandritra ny 12 herinandro— 'Delta dia tena manan-tsaina, tsy matahotra, mahatoky ary mafy loha. Avo dia avo ny drive drive-ny nefa miaina miaraka a saka cranky dia mametra izany. Ankizy mahatalanjona iza HITOMB (vetivety) ho lasa mpiandry alaina tsara toetra izay mirona amin'ny alina. '
Ny Delta the Alaskan Shepherd (Malamute / Shepherd) dia mifangaro toy ny alika kely amin'ny saka eo amin'ny lehibe alika fandriana
Delta the Alaskan Shepherd (Malamute / Shepherd) mifangaro toy ny alika kely alika matory eo am-pandriana
Delta the Alaskan Shepherd (Malamute / Shepherd) mifangaro toy ny alika kely alika ny vata fampangatsiahana dia toerana mahafinaritra hiarahana.
Afangaro toy ny alika kely i Delta the Alaskan Shepherd (Malamute / Shepherd)
Naomy ilay mpiandry ondry any Alaska 5 taona— 'Naomy dia mpiandry ondry any Alaska na hazo fijaliana mpiandry ondry any Alaska. Alika tena marani-tsaina izy, ary tsara fitondran-tena ny ankamaroany ary mety hikiribiby amin'ny fotoana hianarana baiko, saingy tsara trano izy. Niara-niasa tsara tamin'ny tontolo vaovao i Naomi, nanaporofo izany rehefa nifindra avy tany amin'ny firenena izahay nankany amin'ny trano efa ho 200 kilaometatra avy eo. Tiany ny mitaingina fiara sy mandeha amin'ny toerana. Tena mifantoka amin'ny olona izy ary tsara amin'ny ankizy sy saka, saingy tiany ny mametraka ny laharany amin'ny alika hafa alohan'ny hanaiky ny fisian'izy ireo. Mety ho mpampijaly olona izy, nefa tsy dia tia ady amin'ny alika. Tsy dia lalaovina amin'ny alika hafa io alika io, fa tia milalao olona. Mampiseho fihetsika Nightute maro sy fihetsika mpiandry ondry sasany izy. Mahalana izy no mivovo, fa kosa manao ny feo 'woooo' miresaka amin'ny feo alina atao hoe Nightute ary midradradradra izy rehefa maheno ny kiririoka. Manana fihetsika miaro tena izy (hitomany amin'ireo olona mampiahiahy rehefa mandeha alina), saingy mety tsy hitahiry mpangalatra trano izy raha tsy eo aho. Ny fisehoany ivelany sy ny habeny anefa dia manakana ny olona tsy hanakaiky loatra nefa tsy manontany. Mety ho diso fika izy, fa mazàna milamina raha mbola izy nandeha imbetsaka isan'andro . Tena madio izy ary manadio tena toy ny saka. LOT dia mandatsaka betsaka mandritra ny taona. Alika lehibe izy, manodidina ny 83 pounds. Voamarina fa voan'ny tsiranoka hipoka i Naomy tamin'izy herintaona ary efa niteraka izany vanin-taolana . '
Naomy ilay mpiandry ondry any Alaska 5 taona
Naomy ilay mpiandry ondry any Alaska 5 taona nipetraka teo aminy alika fandriana
Mixer mpiandry ondry albaney olon-dehibe 'Ny Malamute x Mpiandry antsika dia tony, malefaka, be fitiavana ary mankatò indraindray, nefa tena hendry sy mahay miaraka amin'ireo zanakay 3 taona sy 5 taona. Ny teboka ratsy fotsiny dia mandatsaka volom-borona be dia be izy, saingy mety ho vokatry ny hafanana tao an-tranonay. '
Fifangaroan'ny mpiandry ondry Alaskan Malamute / Alemanina
Araho ny alika
Tri loko anglisy Springer spaniels
ohatrinona ny alika mpiandry ondry Kaokazy
omby mastiff sy rottweiler mifangaro
1 taona st bernard
saka saka manana maso manga
Alika 20 ka hatramin'ny 30 pounds